Desambra 1, 2021 0 Namaky 5 aho
- Tombano ireo faritra misy ny traikefanao amin'ny fizahantany izay manimba ny fahafinaretana, ny ody ary ny tantaram-pitiavana. Ohatra, ny olona voan'ny aretina:
andalana lava loatra
tsy fahampian'ny fialofana amin'ny toetr'andro, masoandro, rivotra, hatsiaka.
mpiasa tsy mahalala fomba
mpiasa tsy mihaino na tsy miraharaha
fitohanan'ny fifamoivoizana sy fahasahiranana amin'ny seranam-piaramanidina
tsy fahampian'ny fiantsonan'ny fiara sahaza
tsy misy olona vonona hihaino na manana fitarainana?
Raha izany dia ireto no singa sasany manova ny traikefa amin'ny dia tsara ho lasa zava-dratsy.
- Jereo ny fomba ahafahanao mamorona traikefa tsy hay hadinoina. Miaraha miasa amin'ny manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra toy ny jiro, ny fandrafetana ny tany, ny fandrindrana ny loko, ny haingo ivelany sy anatiny, ny fisehoana an-dalambe sy ny lohahevitry ny tanàna, ny fiantsonan'ny fiara, ary ny serivisy fitaterana anatiny. Ny fitaovana ampiasaina, toy ny fiarandalamby San Francisco, dia mety ho fiaran'ny ody raha manatsara ny tontolo iainana izy ireo ary manampy zavatra manokana amin'ny toerana iray.
- Mandrindra ny fety sy ny hetsika hafa miaraka amin'ny ambiansy ny toerana. Matetika ny fetibe no tsara indrindra rehefa tafiditra ao anatin'ny fiaraha-monina fa tsy any ivelan'ny tanàna. Ny fetibe ao an-tanàna izay anisan'ny karazan'ny vondrom-piarahamonina dia tsy vitan'ny manampy ny hatsarana fa mety ho tombony ho an'ny orinasa eo an-toerana fa tsy antony hivoahan'ny vola amin'ny fiarahamonina. Matetika ny fetibe dia atao amin'ny fahafahan'ny mpanome fetibe nefa tsy mieritreritra ny mpandray anjara amin'ny fetibe. Raha any amin'ny toerana mafana sy mando ianao dia aza manao fety amin'ny fahavaratra na amin'ny toerana tsy misy alokaloka. Ataovy mahafinaritra sy miala sasatra ny fetibe fa tsy mandreraka sy manandrana.
-Mamorona atmosfera azo antoka sy azo antoka. Mety hisy ody kely raha matahotra ny olona. Mba hamoronana rivo-piainana toy izany dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny drafitra hatrany am-piandohana ireo matihanina amin'ny fiarovana eo an-toerana. Ny fiarovana ny fizahan-tany dia mihoatra noho ny fananana polisy na manam-pahaizana momba ny fiarovana mandehandeha amin'ny toerana iray. Ny fiarovana ny fizahantany dia mitaky famakafakana ara-tsaina sy ara-tsosialy, fampiasana fitaovana, fanamiana mahaliana sy tsy manam-paharoa, ary drafitra tsara izay mampiditra ny matihanina amin'ny fiarovana amin'ny traikefa amin'ny enchantment. Ny vondrom-piarahamonina miompana amin'ny fizahantany dia mahatsapa fa ny tsirairay eo amin'ny fiaraha-monina dia manana anjara amin'ny famoronana traikefa ara-pizahantany tsara ary iray izay mamorona tontolo miavaka sy manokana tsy ho an'ny mpitsidika ihany fa ho an'ireo izay miaina ao anatin'ny fiarahamonina. Midika izany fa ny toerana miompana amin'ny fizahantany dia mila polisy miompana amin'ny fizahantany sy mpanome fiarovana tsy miankina!
-Aza adino mihitsy fa tsy sahy mandray an-tanana ny mpanjifa. Tsy voatery handeha hiala sasatra na handeha ho any amin’ny toerana halehantsika ny mpitsidika. Rehefa manomboka manaratsy ny olona isika fa amin'ny farany dia manimba ny fananantsika lehibe indrindra, dia ny lazantsika.
Dr. Peter Tarlow koa no filohan'ny Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN)
More on: Peter Tarlow | San Francisco | Tourism
Julia Simpson dia niresaka tamin'ny WTTC Global Summit 2022 Tourism|
Ny momba ny Summer Pass vaovao ho an'ny mpizaha tany ao Abu Dhabi Tourism|
Peter TarlowSan FranciscoTourism
Previous Niitatra izao ny fianarana momba ny homamiadan'ny taolana
Manaraka Ny Birao Mpitsidika Guam dia manohy ny serivisy Guåhan Trolley maimaim-poana